Grain and Fire Portal Umfanekiso Oqingqiweyo Wokukhanya Kwekristali - Imagazini yoyilo
Umfanekiso Oqingqiweyo Wokukhanya Kwekristali
Umfanekiso Oqingqiweyo Wokukhanya Kwekristali Idityaniswe ngokhuni kunye ne-quartz yecrystal, lo mfanekiso okhanyayo usebenzisa umthi omiliselwe kumthi ogciniweyo weenkuni zakudala zeTeak. Sikhunjuzwe amashumi eminyaka lilanga, umoya, kunye nemvula, iinkuni ke ziye zenziwe ngesandla, zandlalwa, zatshiswa zigqitywa kwisitya sokubamba ukukhanya kwe-LED kunye nokusebenzisa amakristali e-quartz njengesixhobo sendalo. I-100% yamakristali e-quartz endalo angasetyenziswanga asetyenziswa kwisikhafu ngasinye kwaye aphantse abe zizigidi ezingama-280 ubudala. Iindlela ezahlukeneyo zokugqibezela iinkuni zisetyenziswa kubandakanya indlela ye-Shou Sugi Ban yokusebenzisa umlilo ukugcina kunye nokutshintsha umbala.
Igama leprojekthi : Grain and Fire Portal, Igama labayili : Sunny Jackson, Igama lomthengi : Sunny Jackson.
Umfanekiso Oqingqiweyo Wokukhanya Kwekristali Sunny Jackson Grain and Fire Portal